Coronavirus nekatsi: vanogona kukuendesa chirwere ichi kwauri? | Noti Katsi
Coronavirus uye katsi: vanogona kukuendesa chirwere ichi kwauri?
Maria Jose Roldan | | Curiosities, Zvirwere
Sekureva kweWHO parizvino, hapana humbowo hwekuti mhuka dzinovaraidza dzakaita sembwa nekatsi dzakatapurira vanhu neCovid-19. Saka kana uine mhuka dzinovaraidza mumba mako sekatsi, Haufanire kuibvisa kana kufunga kuti ine njodzi kuhutano hwako kana hwemhuri yako, mhuka dzako hadzigoni kukutapurira necoronavirus, saka unogona kudzikama pamusoro peizvi.
Chero zvazvingaitika, pazasi isu tichatsanangura matanho aunofanirwa kutora zvese kuitira kuchengetedza katsi yako neyako.
1 Nguva dzose zvakanaka kutora matanho
2 Matipi emhuri ane mhuka dzinovaraidza
2.1 General matanho ekudzivirira kune chero munhu
2.2 General zviyero zvevanhu vane zvipfuwo zvisinei necoronavirus
2.3 General zviyero zvevacoronavirus varwere vane zvipfuyo
2.4 General zviyero zvevanhu vakayedza vaine hutachiona hwecoronavirus asi vanofanirwa kuchengeta zvipfuyo zvavo kumba
Nguva dzose zvakanaka kutora matanho
Iyo yakadzokororwa mamiriro inomira kubva kune hutachiona imbwa inowanikwa muHong Kong. Imbwa yakayedzwa ichiwana hutachiona mushure mekugara nevaridzi vayo vairwara nehutachiona. Imbwa haina kuratidza chero kiriniki zviratidzo zvechirwere, sekureva kwe report yeWorld Organisation yeZvipfuyo Hutano. Hapana humbowo hwekuti imbwa kana katsi dzinogona kuparadzira chirwere kana kuti chirwere chinogona kukonzera mhuka kurwara, sangano rinodaro, kunyange hazvo zvimwe zvidzidzo zvingaunza zvitsva zvitsva.
Sangano rinopa zano varidzi vezvipfuyo zvinotapukirwa kana kubatwa nehutachiona hwecoronavirus kuti vasabatane nehukama hwavo uye kuti vave neimwe nhengo yemhuri inochengeta mhuka. Kana iwe uchifanira kutarisira chipfuwo chako, iwe unofanirwa kuchengetedza tsika dzakanaka dzehutsanana uye kupfeka kumeso kumeso kana zvichibvira.
Matipi emhuri ane mhuka dzinovaraidza
Heano mamwe eakakurudzira akakurudzira kana iwe uine katsi (kana imbwa) pamba panguva yehutano hweveruzhinji dambudziko riri kukonzera chirwere cheCoronavirus (COVID-19). Isu tinokupa iwe aya matipi nekutenda kune mutsa weiyo Yepamutemo Koreji yeVeterinarians veMadrid neComplutense University yeMadrid.
Ivo vanotanga kujekesa kuti hapana humbowo hwesainzi hwekuti mhuka dzinopfuudza iyo coronavirus, ruzivo rwunogona pasina mubvunzo kusiya varidzi vazhinji vemhuka idzi dzakadzikama, kunyanya imbwa dzinoenda kunofamba dzobata zvese nekatsi. Dzinosiya nekupinda kumba. Tichataura nezve matanho aunotaura kuti utore.
General matanho ekudzivirira kune chero munhu
Kutanga ivo vanotaura nezve zvakajairwa matanho kune chero munhu, kufunga zvinotevera:
Geza maoko nesipo nemvura
Kusimuka kwevanhu (kuvharirwa mudzimba)
Kuvhara muromo wako negokora paunenge uchikosora
Usabata maziso, mhino uye / kana muromo
General zviyero zvevanhu vane zvipfuwo zvisinei necoronavirus
Aya matanho ekutora anofanirwa kugara achiitwa, zvisinei necoronavirus:
Mushure mekubata mhuka, geza maoko nesipo nemvura.
Mushure mekubata mhuka, usabata mhino dzako, maziso uye / kana muromo.
General zviyero zvevacoronavirus varwere vane zvipfuyo
Kana iwe uine rombo rakaipa rekubata iyo Coronavirus uye uine mhuka dzinovaraidza, zvakakosha kuti iwe uteedzere anotevera matanho:
Zvinokurudzirwa kusiya kuchengetwa kwechipfuwo chako kune mumwe munhu kwenguva pfupi. (Asi usavasiya, ivo havana mhosva uye ivowo vari vemhuri yako!).
Usasiye midziyo yakajairwa inoshandiswa nechipfuyo nemuchengeti.
Kana midziyo mitsva isingakwanise kuwanikwa, iya inowanzoshandiswa nezvipfuyo inofanirwa kutapukirwa zvakakwana.
General zviyero zvevanhu vakayedza vaine hutachiona hwecoronavirus asi vanofanirwa kuchengeta zvipfuyo zvavo kumba
Aya matanho akagadzirirwa avo vese vanhu avo zvinosuruvarisa kuti vakaedzwa kuti vane coronavirus asi vanofanirwa kuramba vachichengeta zvipfuyo zvavo kumba pavanenge vachipora, nekuti vanenge vasina chero munhu wavanogona kuchengeta katsi dzavo kana chero dzimwe mhuka dzinovaraidza , senge imbwa:
Usati waenda kuna vet, daidzira nhare kuti uzive nezve mafambiro aungaita mune ino mamiriro.
Nguva dzose pfeka chifukidzo pamberi pechipfuwo.
Kunyangwe zvikaoma, zvakakosha kwazvo kune hutano hwenzara yako kana canine yako yaunodzivirira kusangana kwakananga.
Shamba maoko ako kazhinji.
Aya matanho anonakidza kwazvo kuti vanhu vese vazive. Isu tinokusiya iwe pazasi pemufananidzo unopfupisa ruzivo rwese urwu kuti uve naro mune imwe nzira yekuona uye kunyangwe, kuti iwe uripurinte uye iwe ugogona kuiisa munzvimbo inooneka. Dzvanya pano kumuona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Coronavirus uye katsi: vanogona kukuendesa chirwere ichi kwauri?
Ndeipi nguva yekupa kati kugamuchirwa?
Iyo yeBritish Shorthair katsi